मौसम अनुसार कस्तो आहारको सेवन गरी स्वास्थ्य रहन सकिन्छ ? – Jagaran Nepal
मौसम अनुसार कस्तो आहारको सेवन गरी स्वास्थ्य रहन सकिन्छ ?
काठमाडौँ । मौसम परिवर्तन हुँदैछ । चिसो मौसमको समस्या गुजारेर आएकाहरुलाई वसन्त ऋतुको सुरुवातसँगै गर्मीको समस्या सुरु हुन लाग्दैछ । हामी मौसम अनुसारको लवाईखवाईलाई मात्रै ध्यान दिने गर्छाैं । तर, चिसो र गर्मी मौसममा खाने खानाको बारेमा भने खासै धेरै ख्याल गर्दैनौं ।आयुर्वेदले विभिन्न मौसम अनुसारको खाने कुराको वर्गीकरण गरेको छ । आयुर्वेद सम्बन्धी जानकारी दिएका विभिन्न शास्त्रहरुमा यसबारे उल्लेख पाइन्छ । चरक संहिताले कुन मौसममा कुन उमेरका मानिसले कति मात्रामा खानेकुरा खाने ? भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
तिनीहरुले सामान्यतया मानिसले प्रत्येक मौसममा खाने समान किसिमका आहारहरुको वि,रोध गर्ने गर्छन् । आयुर्वेदले मौसमलाई कूल ६ भागमा विभाजन गरेको छ । जसमा ६ वटा ऋतुहरु छन् । सोही ऋतु अनुसार हामीले खानामा फरक पन ल्याउँदा हाम्रो शरीरमा पाचन क्षमतामा बृद्धि हुने र शारीरिक शक्तिलाई त्यसले असर गर्नेगर्छ । त्यसकारण हामीले हाम्रो खानाको चयन र मात्रामा ऋतु अनुसार विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यदि तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने या आफूलाई सधैं निरोगी बनाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो खानामा ध्यान दिनै पर्छ ।
शरद ऋतु (असोज र कात्तिक):यस मौसममा धेरै हल्का, मीठो र नरम खाना खानुपर्छ । किनकि यो मौसममा मानिसको पाचन प्रणाली कमजोर हुने भएकोले पचाउन सजिलो हुने खालका खानेकुरा खानुपर्छ ।शरीरमा पित्त सम्बन्धी समस्या रोक्न, नीम, करेला जस्ता खानेकुराहरू खानुपर्छ । यस समयमा, लौकी, राजगिरा जस्ता सागको सेवन लाभकारी हुन्छ । दालको स्थितिमा यस मौसममा मुगीको दाल, त्रिफला, सुख्खा अंगुर, खजुर, जामुन, परवल, अमला जस्ता फलफूल खानुपर्छ ।
हेमन्त मौसम (मंसिर र पुष):यस मौसममा रातहरू लामो र दिनहरू छोटा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा शरीरको गतिविधि सुस्त हुन्छ र शरीरमा उर्जा बचत हुन थाल्छ । त्यसैले यो समयमा ढिलो पच्ने खालका खानाहरु खानु आवश्यक हुन्छ । यो समयमा रात लामो हुन्छ । त्यसैले बिहान अल्पाहार (ब्रेकफास्ट) गर्नु राम्रो हुन्छ । साथै, घिउ, दुध आदिले युक्त भएको र त्यस्ता दुग्ध पदार्थ मिसाएर पकाएको खानेकुरा खानु राम्रो हुन्छ ।पौष्टिक खाना जस्तै लड्डु, पाक, हलुवा आदि पनि खानुपर्छ । मांसाहारीहरुले मासु, माछा आदिको सेवन गर्नुपर्छ । यो मौसममा टाउकोमा तेलले मालिस गर्नुपर्छ र जति सकिन्छ धेरैबेर घाममा बस्नुपर्छ ।
जाडो शिशिर (माघ फाल्गुन):यस मौसममा शरीरमा उर्जा प्रबल मात्रामा आवश्यक हुन्छ । पाचन प्रकि्रया तीब्र रुपमा चल्छ । तसर्थ, यो मौसममा खाली पेट बस्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । यस मौसममा पौष्टिक खाना अरु बेलाको तुलनामा धेरै खानुपर्छ ।लसुन, अदुवाको अचार आदि धेरै खानुपर्छ । दुध, घिउ, तेल आदिले बनेका खानेकुराहरु खानुहोस् । साथै, चिसोको सट्टा मनतातो पानी खानु राम्रो हुन्छ । यदि तपाईं रोगबाट जोगिन चाहानुहुन्छ भने यस मौसममा चिसो चीज खानु हुँदैन र उपवासबाट टाढा रहनु राम्रो हुन्छ ।
वसन्त ऋतु (चैत र बैशाख):यस मौसममा पाचन रसको उत्पत्ति र त्यसको काम गर्ने क्षमता कम हुने गर्छ । यो मौसममा रुघा लाग्ने जस्ता समस्याहरु बल्भिmने गर्छ । यस्तो अवस्थामा पुरानो अन्न र धान आदिको सेवन गर्नु स्वास्थ्यबर्द्धक मानिन्छ । मुंगको दाल, मसुर, अरहर चना आदिको सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ । यो मौसममा शरीरको मसाज गर्नुहोस् ।मनतातो पानीले स्नान गर्नुपर्छ । यस मौसममा चिसो प्रकृति खाना खानुहुँदैन । धेरै घिउ र भुटेको खाना, मिठाई नखानुहोस् । यो मौसममा दिनमा सुत्ने र रातमा अबेरसम्म जाग्नु पनि हुँदैन ।
ग्रीष्म (जेठ र असार):यस मौसममा पाचन क्षमता अत्यन्त कमजोर हुन्छ । त्यसैले तातो, मसलेदार, नुनिलो, अमिलो र भुटेको खानाबाट सकेसम्म टाढा रहनु राम्रो हुन्छ । फलफूलहरुमा मौसमी अंगुर, अनार, तरबुजा आदि खानु राम्रो हुन्छ । रसिलो फल र फलहरुको रस, नरिवल पानी, उखुको जुस आदि पिउनु यो मौसममा राम्रो हुन्छ । जति सकिन्छ धेरै पानी पिउनुहोस् र चिसो तेलले टाउकोमा मसाज गर्नुहोस् ।
बर्षा ऋतु (साउन र भदौ):यस मौसममा शरीरमा पाचनसँग सम्बन्धित रोगहरू बढी हुन्छन् । खानामा दुध, घिउ, मह, जौ, गहुँ, चामल आदि धेरै खानुपर्छ । यो समयमा धेरै सुक्खा अदुवा र कागती खानु राम्रो हुन्छ । यो समयमा पानी उमालेर पिउनु राम्रो मानिन्छ । यस मौसममा रक्सी, मासु, माछा र दही धेरै नखाएकै राम्रो ।